ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Concept ပါ။
တာဝန်ယူမှု၊ တိုးတက်အောင်၊ အောင်နိုင်သူ
ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်ရန် ထိပ်တန်း အကြောင်းရင်း ၆ ခု
PET Tea Bag ၊
PLA ယက်မဟုတ်သော လက်ဖက်ခြောက်အိတ်
လက်ဖက်ခြောက်အိတ်ရဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဘာတွေလဲ။
လက်ဖက်အိတ် အမျိုးအစားများစွာ ရှိကြောင်း ပြောရလျှင် စျေးကွက်တွင် အသုံးများသော လက်ဖက်အိတ် ပစ္စည်းများမှာ ပြောင်းဖူးမျှင်၊ ယက်မဟုတ်သော pp ပစ္စည်း၊ ယက်မဟုတ်သော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ပစ္စည်း နှင့် ဇကာစက္ကူ စက္ကူများ နှင့် ဗြိတိသျှတို့ နေ့စဉ်သောက်သုံးသော စက္ကူလက်ဖက်ခြောက်အိတ် ၊ . တစ်ခါသုံးလက်ဖက်ခြောက်အိတ်ကရော ဘယ်လိုမျိုးကောင်းလဲ။ အောက်မှာ တစ်ခု...
လက်ဖက်ခြောက်တင်ပို့မှုသည် 2025 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.5 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ဝဘ်ဆိုဒ်အရ မကြာသေးမီက စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စျေးကွက်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် တရုတ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေးနှင့် စျေးကွက်သမဝါယမအသင်းချုပ်တို့က “လမ်းညွှန်ချက်။ ။ .
ဝုန်း! ဥရောပပထဝီဝင်အညွှန်းသဘောတူစာချုပ်၏ ကာကွယ်မှုစာရင်းတွင် လက်ဖက်ပထဝီဝင်အညွှန်းထုတ်ကုန် ၂၈ ခုကို ရွေးချယ်ထားသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂကောင်စီသည် တရုတ်-အီးယူ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ အချက်ပြသဘောတူစာချုပ်ကို တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ပြုရန် ဒေသစံတော်ချိန် ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ Europe Geographical Indication ထုတ်ကုန် 100 နှင့် EU ရှိ Chinese Geographical Indication ထုတ်ကုန် 100 ကို အကာအကွယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ညီ...
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ polylactic acid (PLA) စက်မှုလုပ်ငန်းစျေးကွက်အခြေအနေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း 2020၊ ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုအလားအလာများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးချဲ့ခြင်း။
Polylactic acid (PLA) သည် အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည့် ဇီဝအခြေခံပစ္စည်း အမျိုးအစားသစ်ဖြစ်သည်။ ထောက်ပံ့မှုအရ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် polylactic acid ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် 2020 ခုနှစ်တွင် တန်ချိန် 400,000 နီးပါးရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် Nature Works of the...
စက်မှုလေ့လာတွေ့ရှိချက် | ပေါက်ကွဲပျက်စီးနိုင်သော ပလတ်စတစ်များကြောင့် PLA စျေးနှုန်းများ မြင့်မားနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ကုန်ကြမ်းလက်တစ်ဒ်သည် PLA လုပ်ငန်းတွင် ပြိုင်ဆိုင်မှု၏ အဓိကနေရာ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
PLA သည် ရှာရခက်ပြီး Levima၊ Huitong နှင့် GEM ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများသည် ထုတ်လုပ်မှုကို တက်ကြွစွာ တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ အနာဂတ်တွင်၊ lactide နည်းပညာကိုကျွမ်းကျင်သောကုမ္ပဏီများသည် အပြည့်အဝအမြတ်အစွန်းများရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Zhejiang Hisun၊ Jindan Technology နှင့် COFCO Technology တို့သည် အပြင်အဆင်ကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ Financial Associati ရဲ့ အဆိုအရ...
အချိန်နှင့် အာကာသ ပြောင်းလဲမှုသည် ပို၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ 2021 Hotelex Shanghai Post ပြပွဲအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်။ ပြခန်းဖွင့်သူတွေနဲ့ ပရိသတ်က ပိုသိတယ်။
admin မှ 21-06-17 ရက်နေ့တွင်
2021 ခုနှစ် မတ်လ 29 ရက်နေ့မှ ဧပြီလ 1 ရက်နေ့အထိ၊ 30th Shanghai International Hotel and catering Expo ကို Shanghai Puxi Hongqiao National Convention and Exhibition Center တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဤပြပွဲသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးကတ် လှုပ်ရှားမှုများထဲမှ တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
4th China International Tea Expo ကို Hangzhou မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
မေလ ၂၁ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တရုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လက်ဖက်ခြောက်ပြပွဲကို Zhejiang ပြည်နယ်၊ Hangzhou တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ငါးရက်ကြာ Tea Expo သည် "လက်ဖက်ရည်နှင့်ကမ္ဘာ၊ မျှဝေသုံးစွဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး" ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ကျေးလက်ဒေသ ပြန်လည်ရှင်သန်ရေး မြှင့်တင်ရေးကို အဓိကလိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ခိုင်မာအားကောင်းစေမည့် ...
2021 China Xiamen International Tea Industry Fair (နွေဦးရာသီ) ကုန်စည်ပြပွဲကို ယနေ့ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။
2021 Xiamen International Tea Industry (နွေဦးရာသီ) ကုန်စည်ပြပွဲ (နောင်တွင် "2021 Xiamen (နွေဦး) Tea Expo" ဟုရည်ညွှန်းသည်)၊ 2021 Xiamen နိုင်ငံတကာထွန်းသစ်စ လက်ဖက်ခြောက်လုပ်ငန်းပြပွဲ (2021 Xiamen emerging Tea Exhibition)၊ နှင့် 2021 ...
လက်ဖက်ခြောက်အိတ်၏ ပစ္စည်းကို ခွဲခြားရန် နည်းလမ်းငယ် ၂ ခု
21-05-15 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ယနေ့ခေတ်တွင် လက်ဖက်ခြောက်အိတ် အမျိုးအစားများစွာတွင် လက်ဖက်ခြောက်အိတ် အမျိုးအစားများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ လက်ဖက်ခြောက်အိတ်၏ ပစ္စည်းကို မည်သို့ခွဲခြားနိုင်မည်နည်း။ ဒီနေ့မှာတော့ လက်ဖက်ခြောက်အိတ်ရဲ့ ပစ္စည်းကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးနှစ်ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1.The အဖြစ်အများဆုံး filter စက္ကူလက်ဖက်ရည်အိတ်။ 2. နိုင်လွန်လက်ဖက်ရည်အိတ်။ 3. ပြောင်းဖူးမျှင် တြိဂံလက်ဖက်ရည်ခ...
အမှတ် ၃၊ Huaqian Avenue၊ Pingqiao Town၊ Taizhou၊ Zhejiang၊ China
ဝုန်း! လက်ဖက်ခြောက် ၂၈ မျိုး ရွေးချယ်ထားသော ပထဝီဝင်အနေအထားအရ ...
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပိုလီလက်တစ်အက်ဆစ် (PLA) လုပ်ငန်း စျေးကွက်အခြေအနေနှင့် ဃ...
စက်မှုလေ့လာတွေ့ရှိချက် | PLA စျေးနှုန်းများ မြင့်မားနေခြင်းကြောင့်...